ယီမင်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းရှိ အေဒင်လေဆိပ်ပေါက်ကွဲမှုများတွင် သေဆုံးသူ ၂၂ ဦးအထိ ရှိလာ - Xinhua News Agency
အေဒင်၊ ယီမင်၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန် – ခေါန်ရိန်
နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဆိပ်ကမ်းမြို့ဖြစ်သော အေဒင်မြို့ အခြေစိုက်သည့် အစိုးရထောက်ခံသော ဝန်ကြီးဌာန၏ ကြေညာချက်အရ လေဆိပ်ပေါက်ကွဲမှုများကြောင့် လူ ၂၂ ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး အခြားသူ ၅၀ ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယီမင်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း Aden နိုင်ငံတကာလေဆိပ်တွင် ပေါက်ကွဲမှုသုံးကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးနောက် အေဒင်လေဆိပ်ကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ယီမင်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း Aden နိုင်ငံတကာလေဆိပ်တွင် ပေါက်ကွဲမှုသုံးကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးနောက် လေဆိပ်၏ ပင်မဝင်ပေါက်တွင် စစ်သားများ စုဝေးရောက်ရှိနေသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဝန်ကြီးဌာန၏ ကြေညာချက်အရ အဆိုပါ ဆက်စပ်ပေါက်ကွဲမှုများသည် လေဆိပ်တွင် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များကို ကြိုဆိုရန် စုရုံးလျက်ရှိသည့် ဒေသဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဝန်ထမ်းများကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ယီမင်နိုင်ငံ သမ္မတ Abdu-Rabbu Mansour Hadi က ပေါက်ကွဲမှု နောက်ကွယ်တွင် ဟူသီသူပုန်အုပ်စုရှိကြောင်း စွပ်စွဲပြောဆိုခဲ့သည်။
အေဒင်လေဆိပ်တိုက်ခိုက်မှု ဂယက်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအတွက် အာဏာခွဲဝေရေးအစိုးရအသစ်မှ ကော်မတီတစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းရန် ယီမင်သမ္မတက တရားဝင်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
အသစ်ခန့်အပ်ခဲ့သော ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးနှင့် လုံခြုံရေးနှင့်ထောက်လှမ်းရေးဌာန ခေါင်းဆောင်များကို အေဒင်တွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီကို ဦးဆောင်ရန် ဆော်ဒီအာရေးဗျဦးဆောင်သော ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် Hadi က ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံပိုင် Saba သတင်းအေဂျင်စီက သတင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
“အီရန်နိုင်ငံက ကျောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ ဟူသီစစ်သွေးကြွအဖွဲ့နဲ့ အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေက လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုလုပ်ရပ်တွေဟာ ယာယီမြို့တော် အေဒင်ကနေ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ တရားဝင်အစိုးရကို ဟန့်တားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး” ဟု ဝန်ကြီးချုပ် Maeen Abdulmalik နှင့် တယ်လီဖုန်းပြောဆိုရာ၌ Hadi က အလေးထားပြောကြားခဲ့ သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ယီမင်နိုင်ငံရှိ နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ (ICRC) က အေဒင်လေဆိပ်ပေါက်ကွဲမှုအတွင်း ၎င်းတို့၏ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ယီမင်နိုင်ငံရှိ နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ရုံးခွဲကလည်း ၎င်းတို့၏တရားဝင်တွစ်တာအကောင့်တွင် တင်ခဲ့သည့် ကြေညာချက်တစ်စောင်တွင် “အေဒင်လေဆိပ်ပေါက်ကွဲမှုတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရခြင်းအပေါ် အလွန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါကြောင်း” ရေးသားခဲ့သည်။
“အခြားသောလူနှစ်ဦး ပျောက်ဆုံးနေပြီး သုံးဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းများမှာ အခြားသော အရပ်သားများနှင့် လေဆိပ်ထဲတွင် ဖြတ်သန်းသွားလာနေကြောင်း၊ ယီမင်ပြည်သူများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ကြောင်း” ကြက်ခြေနီအဖွဲ့က ဖော်ပြထားသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့က Aden လေဆိပ်၌ ပြင်းထန်သော ပေါက်ကွဲမှု သုံးခုသည် ဆော်ဒီအာရေးဗျမှ အာဏာခွဲဝေရေးအစိုးရသစ် ရောက်ရှိလာပြီး မိနစ်အနည်းငယ် အကြာ၌ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုလအစောပိုင်းက Hadi သည် ယီမင်တွင် Saeed ဦးဆောင်သည့် အာဏာခွဲဝေရေးအစိုးရအသစ် ဖွဲ့စည်းရန် အမိန့်ဒီကရီတစ်ရပ်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ယင်းလုပ်ဆောင်မှုအပေါ် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ၏ ကြိုဆိုခြင်းလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါ အစိုးရသစ်တွင် ယီမင်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်း ပြည်နယ်များအကြား ညီတူညီမျှခွဲခြားထားသော ဝန်ကြီးအဖွဲ့ ၂၄ ခု ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
ယီမင်အစိုးရသစ်အား ပြီးခဲ့သည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလက ယီမင်အစိုးရနှင့် တောင်ပိုင်းလူမျိုးစုကောင်စီ (STC) အကြား ပူးတွဲလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သော Riyadh ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်နှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2020-12-31 02:44:11|Editor: huaxia
ADEN, Yemen, Dec. 30 (Xinhua) — The number of deaths caused by three explosions that struck Aden’s airport in southern Yemen rose to 22 on Wednesday evening, the country’s Interior Ministry announced.
According toastatement released by the pro-government ministry based in the southern port city of Aden, nearly 22 people were killed and 50 others wounded in Aden’s airport blasts.
The ministry’s statement indicated that the coordinated blasts targeted local officials and employees gathered to welcome the government’s members at the airport.
Yemen’s President Abdu-Rabbu Mansour Hadi accused the Houthi rebel group of being behind the explosions.
He also stressed, during his phone call with the country’s Prime Minister Maeen Abdulmalik, that “the terrorist acts committed by the Iranian-backed Houthi militia and extremist terrorist groups will not discourage the legitimate government from exercising its duties from the temporary capital of Aden.”
Meanwhile, the International Committee of the Red Cross (ICRC) in Yemen said that one of its employees died during the airport’s explosions in Aden.
The Red Cross branch in Yemen said inastatement posted on their official Twitter account that “we are profoundly saddened that one of our colleagues was killed in Aden’s airport explosion.”
“Two others are unaccounted for and three were injured. Our staff were transiting through the airport with other civilians. This isatragic day for us and the people of Yemen,” the Red Cross statement said.
Three massive explosions on Wednesday struck Aden’s airport just minutes after the arrival ofanew power-sharing government from Saudi Arabia.
1-(201230) — ADEN, Dec. 30, 2020 (Xinhua) — Soldiers gather at the airport’s main gate following three explosions rocked the Aden International Airport in Aden, Yemen, Dec. 30, 2020. Three massive explosions rocked the Aden International Airport in southern Yemen on Wednesday, killing at least seven people,asecurity official and medical sources said. (Photo by Murad Abdo/Xinhua)
2-(201230) — ADEN, Dec. 30, 2020 (Xinhua) — Photo taken on Dec. 30, 2020, shows the view of the Aden International Airport from the seaside after three explosions rocked the airport in Aden, Yemen. Three massive explosions rocked the Aden International Airport in southern Yemen on Wednesday, killing at least seven people,asecurity official and medical sources said. (Photo by Murad Abdo/Xinhua)
3-(201230) — ADEN, Dec. 30, 2020 (Xinhua) — Soldiers gather at the airport’s main gate following three explosions rocked the Aden International Airport in Aden, Yemen, Dec. 30, 2020. Three massive explosions rocked the Aden International Airport in southern Yemen on Wednesday, killing at least seven people,asecurity official and medical sources said. (Photo by Murad Abdo/Xinhua)
4-(201230) — ADEN, Dec. 30, 2020 (Xinhua) — Soldiers gather at the airport’s main gate following three explosions rocked the Aden International Airport in Aden, Yemen, Dec. 30, 2020. Three massive explosions rocked the Aden International Airport in southern Yemen on Wednesday, killing at least seven people,asecurity official and medical sources said. (Photo by Murad Abdo/Xinhua)
5-(201230) — ADEN, Dec. 30, 2020 (Xinhua) — Soldiers gather at the airport’s main gate following three explosions rocked the Aden International Airport in Aden, Yemen, Dec. 30, 2020. Three massive explosions rocked the Aden International Airport in southern Yemen on Wednesday, killing at least seven people,asecurity official and medical sources said. (Photo by Murad Abdo/Xinhua)